Filaharana ao anaty bileta tokana Raikitra ny antso ho amin’ny fanitsiana azy
Ekena fa « scrutin séparé » na misaraka ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny tanàna, hoy ny manampahaizana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana, Julien Andriamorasata,
izany hoe misy vata fandatsaham-bato miisa 2 amin’ny fifidianana ary samy hafa koa ny « Panneaux d’affichage » natokana ho an’ny praopagandy. Ny fisarihana ny nomeraon’ireo kandida kosa dia ny CENI, no mandamina azy. Na ilay didim-panjakana 2019 – 15/41 tamin’ny 14 aogositra 2019 aza, izay fampiharana ny lalàna fehizoro 2018 -008 tamin’ny 11 mey 2018 dia tsy mametraka ny fepetra tokony hanaovana io fisarihana io. Mahagaga anefa, hoy ny fanazavany fa nataony misaraka ary manjary mampikorontana ny sain’ny olona ilay fisarihana tamin’ity satria manokana ny nomeraon’ny kandida ben’ny tanàna ary hafa koa ny an’ny mpanolotsaina. Efa nisy ny tsy fahatombanana tamin’ny fifidianana ary nihena ny taham-pahavitrihana dia mbola asarotina ihany, hoy izy, ilay fomba fifidianana. Tsy mbola tara anefa raha mamoaka naoty hamerenana ny fisarihana ny CENI. Ny depiote voafidy tao amin’ny boriborintany faha 6, Todisoa Andriamampandry, moa dia nanao antso ny amin’ny hijerena io resaka laharana io hampilamina ity fifidianana ity. Fifidianana mangarahara sy madio, hoy izy, no tadiavin’ny vahoaka. Raha vao hafahafa io dia vao mainka mbola hihena indray ny mpifidy. Adidy masina ny mifidy ary midika tsy fahatokisana ny mpitondra sy mpanao politika intsony ny tsy fahatongavan’ny vahoaka mifidy. Ho an’ny antoko politika Tiako I Madagasikara manokana, hoy hatrany ity kandidan’ny TIM ity, dia olona manana etika daholo ireo kandidany ireo ary manana foto-kevitra hampandrosoana ny kaominina ilatsahany tsirairay avy. Na ny lisitra koa aza, hoy izy, mila diovina fa raha mbola ilay taloha no miverina dia minoa ahy ianareo fa fahamenarana ho an’ny nosy manontolo no hitranga.